UReachli ungaphezulu kwe-70,000 yabathengisi abafumana ngaphezulu kwesigidi se-3.5 sokujonga rhoqo ngenyanga! I-Reachli ine-teknoloji yokuthengisa kunye nokutshatisa isebenzisa igama eliphambili, umxholo, kunye ne-algorithms ehambelana nefoto yokubhangqa nawuphi na umfanekiso okhoyo kwiwebhu kunye nesibhengezo esifanelekileyo nesibandakanyekayo. Kwaye ukuba ungumpapashi onokulandela okubalaseleyo kwindawo yakho nakwiakhawunti yemidiya yoluntu, uReachli unokukunceda ekwenzeni imali kolo luntu.
Enkosi kwiqela elikwi-HCCMIS, a inshurensi yokuhamba inkampani, ngokukhomba indawo kum namhlanje. Iqela lokuthengisa ngaphaya lenza umsebenzi omangalisayo wokukhuthaza umxholo obonakalayo kunye nokufumana impendulo enkulu! Ngabathengisi beB2C abanobuchule abavavanya kwaye balinganise yonke into abayenzayo.